Kukhonjwa abe-SRC ngesiphithiphithi eDUT - Ilanga News
Home Izindaba Kukhonjwa abe-SRC ngesiphithiphithi eDUT
Seluchithiwe uhlelo lokubhalisa online, kuthiwa kalusebenzi
KUNGENELELE amaphoyisa ehlakaza ngesisi esikhalisa unyembezi nangezinhlamvu zenjoloba abafundi abebebhikisha, befuna ngodli izikhala
zokufunda izolo ngoLwesithathu eDUT, eThekwini. Kwesishuthekiwe ngomunye umfundi obesele dengwane ngemuva kwesiphithiphithi.
IZITHOMBE NGU: MTHOBISI SITHOLE
KUKHONJWA ngenju-mbane umkhandlu omele abafundi (Student Represe-ntative Council – SRC) ngodungunya-ne olusuke eDurban University of Technology (DUT), eThekwini, kuphuma nesinedolo abafundi bethi bayofuna izikhala zokufu-nda, kwaze kwashaywa indiva nemigomo ebekelwe ukunqanda ukusabalala kweCoronavirus.
Kusukela ngoLwesibili kuze kuba yizolo ngoLwesithathu – lapho iziphathimandla zenyuvesi ziqome ukugaxa ingidi emnyango, savalwa isikhungo – abafundi abebeyofuna izikhala bebengangoZulu eya eMakheni, kwasuka isiphithiphithi amaphoyisa ebahlakaza, abanye baboshwa.
Bese kuwusizi abanye abafundi abebephuma ezindaweni ezahlu-kene kubalwa iKwaNongoma, iNewcastle – bejokola begoduka namasudukesi nezingubo zokulala.
Kusolwa iSRC ngokuhambela phambili isikhungo, yamema aba-fundi ezinkundleni zokuxhumana, ibatshela ukuthi zimbiwe yinsele eDUT, mabathutheleke khona
beyofuna izikhala zokufunda.
Ngokuthola kweLANGA, iSRC isabalalise isitatimende esithi le nyuvesi isiyakuvumela ukuba abafundi baziyele mathupha emagcekeni ayo beyobheka izikhala zokufunda.
NgoLwesibili izindimbane zabafundi zilaliswe esakhiweni sezemidlalo ngaphakathi kulesi sikhungo ngenxa yokuswela indawo yokulala, kanti izolo ngoLwesi-thathu, inyuvesi ikunqabile lokhu.
Omunye wabafundi abebeyo-bheka izikhala zokufunda, uPhu-mlani Ndlovu waseMbongolwane, eShowe, utshele ILANGA ukuthi ufike ngoLwesine olwedlule nga-phandle kwamagceke ale nyuvesi.
Uthi ubethathiwe ukuyokwenza iziqu zobuthishela kodwa wajikijswa, kwathiwa kwenzeke iphutha empeleni bekumenywe omunye umfundi.
“Umqhafazo engiwutholile ubuthi mangifike eDUT, kawuza-nge ucacise ukuthi kumele ngiye ophikweni oluseMgungundlovu ngoba bengingenalo ulwazi loku-thi ubuthishela bufundelwa eNdumiso, eMgungundlovu.
“Zonke lezi zinsuku bekunga-ngeneki enyuvesi kwaze kwaba yiSRC edlovayo, yavula amasango ngenkani, yathi masingene,” kusho uPhumlani.
UYoliswa Zikode ogcine eboshiwe, uthi usuke kubo oSuthu, KwaNongoma ngoba selokhu wathumela isicelo kulesi sikhu-ngo, akakaze ayithole impendulo.
“Ngibone kuxoxwa ezinkundle-ni zokuxhumana, kuthiwa eDUT ‘sekuwuthela wayeka’. Umoya wami ubuhlungu ngesimo esibhe-kene naso,” kusho lo mfundi.
Okhulumela iDUT, uMnu Alan Khan, uthi inyuvesi inqume ukuvala thaqa ezimpikweni zonke zaseThekwini. Uthi lesi sikhungo kasikaze simeme abafundi ukuba bayobheka izikhala.
Uvumile ukuthi ikhona imikhakha engakagcwali, ikakhulukazi owakwa-Applied Sciences, kodwa kabakaze bathi abafundi mabazifikele mathupha.
“Besivule ithuba lokuthi bonke abafundi abathole izikhala eDUT beze bezosizwa ngaphakathi ekutheni babhalise ngenxa yokuthi babhekene nezinqinamba, abanye kabakwazi ukubhalisa online.
“Kasikaze sithi laba abebefake izicelo noma abafakwe ohlwini lokuthi balinde ukwamukelwa nabo beze esikhungweni,” kusho uMnu Khan.
Uthi izitshudeni ziyalelwe ukuba zifonele iminyango yemi-khakha enezikhala, hhayi ukuthi ziye esikhungweni. Uveze ukuthi seluhoxisiwe uhlelo obeluvulwe isipesheli lokusiza abafundi ngaphakathi ukuba babhalise.
“Abafundi sebezoqhubeka nokubhalisa online emakhaya, ngeke kusasizwa muntu ngapha-kathi,” kusho uMnu Khan.
UMengameli weStudent Repre-sentative Council (SRC), uMnu Zabelo Ntuli, uthi akulona iqiniso ukuthi lezi zindaba ezingamampu-nge zokumenywa kwabafundi,
zikhishwe wumkhandlu wabo (abafundi).
Uthi okudale izinkinga wukuthi ukuze abafundi bakwazi ukungena ngaphakathi babhalise, bekumele banikwe izimvume yisikhungo, okuwuhlelo athi kaluhambanga kahle. Uthi lesi sikhungo sinezi-khala zabafundi abawu-9 000 abavela kumatikuletsheni, okumele babhalise kodwa kusabhalise abawu-4 000 kuphela.
“Yithina mkhandlu wabafundi esithe inyuvesi mayivumele abafundi beze ngaphakathi ukuze babhalise, ikakhulukazi laba abaqalayo ukuzofunda ngoba bese kucacile ukuthi uhlelo lokubhalisa lumile.
“Sithe makuvunyelwe nalaba abangenazo izimvume zokungena ngaphakathi, nangempela bakwamukela lokho. Ngesonto eledlule sisebenze ngalo lolu hlelo sakwazi ukubhalisa abafundi abawu-4 000.
“ngoLwesine olwedlule yona inyuvesi imemezele ukuthi kukhona izikhala, kasikho thina isitatimende esivela kithina esimeme abafundi,” kusho uMnu Ntuli.
Uthi uhlelo lokubhalisa onlinebaluchithe ngoba kalusebenzi futhi bazokulwela lokho.
Ukubhalisa e-DUT bekumele kuvalwe mhla ka-15 ngenyanga edlule.
Okhulumela amaphoyisa KwaZulu-Natal, uCapt Nqobile Gwala, uthe amaphoyisa abophe abafundi abawu-16 ngokususa uthuthuva emphakathini.
Uthe bagqekeze amasango, bacekela phansi namakhompyutha babasa nomlilo ogcine ucishwe ngonogada.
Uthe bazovela eNkantolo yeMa-ntshi yaseThekwini namuhla.
Previous articleKubatshazwa intobeko kuDkt Frank Mdlalose
Next articleUMotaung uthi angeke asilibale esase-Ellis Park